NOSY BE : Nasiana fanamboarana ny kianja Ambodivoanio mba hampazoto ireo t
Nohidiana mandritra ny roa volana, tsy azo anaovana hetsika ny ao anatin’ ny kianja Ambodivoanio any Nosy Be. 23 janvier 2018
Naato izany noho ny fambolena bozaka sy fanamboarana ny simba ao anatiny. Natao ity hetsika ity mba hampazoto ireo mpisehatra amin’ny baolina kitra, ny mpilalao sy mpijery araka ny nambaran’ny filohan’ny seksiona ao Nosy Be. Ireo mpilalao baolina kitra sy klioba ao an-toerana no mpandray anjara miara-nisalahy amin’ny fikarakarana sy fanamboarana rehetra.
Nosafidiana isaky ny faran’ny herinandro ny fanatanterahana ny asa ka ny faran’ny herinandro lasa teo no nanombohana izany. Mbola ny volan’ny seksiona baolina kitra ao Nosy Be madiodio hatreto no niantohana ny lany rehetra. Marihina fa tsy afaka mandray lalao iraisam-paritra ny kianja Ambodivoanio Nosy be noho ny faharatsian’ny fotodrafitrasa misy.
Noho izany dia nandray fanapahan-kevitra ny ao an-toerana ka nahatsapa ny hanajary sy hanatsara ny kianja Ambodivoanio ity. Araka ny voalaza dia tsy ampy fikara- karana ny kianja ary eo ihany koa ny voka-dratsy apetraky ny festival roa miantoana isan-taona ao amin’ny kianja Ambodivoanio Nosy Be. Ankoatra izany dia voalaza fa lasa nataon’olona sasany fandrohizana omby ny ao anaty kianja. Fantatra hatrany fa ny avy amin’ny kaominina no niantoka ny fanomezana fitaovana hitrongisana ny tany hovolena ireo gazon ireo.